१७औँ तीज फेस्टिभल एन्ड ट्रेड फेयर — Motivatenews.Com
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा चन्द समूह आपराधिक गतिविधि छाडेर संवैधानिक दायराभित्र रही सार्वभौमसत्ता रक्षा र स्वाधीनताको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सो समूहलाई आपराधिक गतिविधि नगर्न...
नानजिङ् । पूर्वी चीनको जिआङसु प्रान्तको याङचेङ जिल्लामा रहेको एउटा रासायनिक मल उद्योगमा ठूलो विस्फोट हुँदा ४४ जनाको मत्ृयु हुनको...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा कार्यरत नायब सुब्बा रामकुमार फुयाँललाई रु ६० हजार घुस लिएको...
–अच्युत रेग्मी/काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । नेविसङ्घ को ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राजीनामा...
बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुपन्देहीको भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन गरी प्रगतिको जानकारी लिएका छन् । आज...
यही चैत्र ८– ९ गते हुन लागेको नेपाल निर्माण ब्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको छैटौं अधिवेशनमा आ आफ्नो प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा...
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन दस्तुर सेवाग्राहीको सहजताका लागि अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको...
काठमाडौँ – एन्जिला रेग्मी र प्रताप दासको आवाजमा रहेको ‘बस बस रे’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डि.पि खनालको शब्द तथा...
चैत्र ८ कालिकोट – कालिकोटको मान्ममा रहेको रेडियो नयाँ कर्णाली एफएममा प्राविधिक तथा संवाददताका रुपमा कार्यरत सञ्चारकर्मी कर्ण विश्वकर्मालाई प्रहरीले...
चैत्र ८ काठमाडौँ – देशका पहाडी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहेपनि अन्य क्षेत्रमा शुक्रबारको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम...
विराटनगर । नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको पाँचौ महिला साफ फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल समूहले बिजयी प्राप्त गरेमा प्रदेश नं १ सरकारले जनही रु दुई लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ...
चैत्र ८ काठमाडौँ – रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला हुने भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता...
काठमाडौँ । विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको...
चैत्र ५, काठमाडौं – जापान, कोरियालगायतका देशमा जान सहजताका लागि भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अधिकांश कन्सलटेन्सीले ठगी धन्दा चलाउँदै आए पनि...
काठमाडौँ – आजका अधिकांश मान्छे दुःखी, दरीद्र, चिन्तित, गलित, पीडित र असफल हुनुको मुख्य कारण लिन र दिन नजान्नुको कारण हो । यदि कुनै व्यक्तिले मैले के लिने ? के दिने स्पष्ट बुझ्छ भने ऊ दुःखी तथा असफल भन्ने कुरा नै हुँदैन । “अघि पछि अन्त चैतमा जन्त” भने झै...
काठमाडौँ – एन्जिला रेग्मी र प्रताप दासको आवाजमा रहेको ‘बस बस रे’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डि.पि खनालको शब्द तथा भिम बिसीको संगीत रहेको उक्त गीत हालै मात्र युट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको हो । यस गीतको संगीत संयोजन भने उदय राज पौडेलले गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा चर्चित नृत्य समुह कार्टुन्ज क्रिउको...
काठमाडौँ । चर्चित नायक अनमामेल केसी अभिनित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ मा समावेश अर्को गीत बजारमा आएको छ । शुक्रबार युट्युव मार्फत यो फिल्मको लोकलयमा आधारित गीत रिलिज गरिएको...
दाह्री ग्याङको होली कैलाश डाडाँमा !
काठमाडौंँ । दाह्री ग्याङगले राजधानीको पशुपतिस्थित कैलाश डाडाँमा होली विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । विगतमा समेत सोही ग्याङगले यस्ता सामाजिक कार्यहरुमा आफनो सहभागीता देखाउदै आएको पाईन्छ । बुधबार सम्पन्न...
होली पर्वमा बढ्ने उच्छृङ्खलताको निगरानी गर्न प्रहरीको अभियान
काठमाडौँ । रङ्गको पर्व होलीलाई संस्कृतिअनुसार आपसी शुभकामना साटासाट गरेर शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष प्रचारात्मक अभियान चलाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विगत तीन दिनदेखि नै हरेक प्रहरी इकाइमार्फत...